Igumbi eliphezulu elikhethekileyo (kufuphi) neWarsaw. Hlala kwisitayile.
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguHakan/Dorota
Umgangatho opholileyo weloft/attic enendawo eyi-100m2 apho abantu aba-4-6 banokuhlala lula. Ihonjiswe ukuze ikhululeke kwaye ithandeke. Kukho igumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini, enye indawo enebhedi ezingamawele, kwaye kwisaluni sibonelela ngeebhedi ezimbini ezinkulu ezitofotofo. Itafile enkulu yekofu ye-antique yase-Indonesia inokuphinda kabini njengendawo yokusebenza. i-wi-fi iyafumaneka. kukwakho i-terrace enkulu apho unokufumana umoya omtsha ngeentsuku zelanga kunye nokufudumala kwelanga. sikwabonelela ngenkundla yebhola yevoli yaselwandle kwindawo yangasemva kwabo banqwenela ukudlala
yonke indawo isandula ukwakhiwa kwaye ihonjiswe ukuba ipholile kangangoko kunokwenzeka. Kukho iiragi ezenziwe ngezandla zasePersi zomgangatho ophezulu kwimigangatho yomthi oqinileyo kunye nezibane zetiffany ezijinga kwisilingi ephezulu. Unokuhlala kamnandi kwaye ube nayo yonke indawo yakho yeentlanganiso njl.njl. Igumbi lokulala alikho likhulu kakhulu kodwa linefestile yesibhakabhaka ebonelela ngokukhanya kwendalo kunye nomoya omtsha ngeentsuku ezishushu.
IMichalowice ngokusemthethweni yilali ephuma nje eWarsaw kodwa eneneni ikufutshane neziko lesixeko saseWarsaw kunezithili ezininzi zaseWarsaw. Iindlela zoqhagamshelo zezona zibalaseleyo esixekweni ukuze ufike kumbindi wesixeko ngemoto okanye ngololiwe ngemizuzu eyi-15 ukuya kwengama-20 ubuninzi. Lo mmandla uphela wenziwe zizindlu zeentsapho ezineegadi, izitrato ezicocekileyo ezikhathalelwe kakuhle kunye nendawo eluhlaza phakathi. kukho iivenkile ezinkulu ezininzi ezikufutshane kunye nezinto ezininzi ezinokwenzeka zokwenza imidlalo ngaphakathi nangaphakathi. iindlela zokukhwela ibhayisekile, ukubaleka, inkundla yevoli yevoli yabucala kunye neendawo zempilo zoluntu ziyafumaneka kunye neringi yokutyibiliza emkhenkceni ebusika kumgama nje ongama-200m. ungafika apha naphi na usuka ewarsaw ngokulula nge4-8 Euro Uber ride
4.75 ·Izimvo eziyi-49
4.75 · Izimvo eziyi-49
Indawo ephezulu yinxalenye yendlu yedolophu kwenye yezona ndawo ziphakamileyo zewarsaw. Bubuchwephesha obungaphandle nje kwe-warsaw kodwa ngenene ikufutshane kumbindi wesixeko kunezithili ezininzi ze-warsaw
Umbuki zindwendwe ngu- Hakan/Dorota
silusapho sinabafana aba3 so almost every day sisekhaya. Ukufikelela kwindawo yakho kuhlala ngesalon yethu ehlala ingenanto kuba umfazi wam ubambe iiseshini zeyoga eziqhelekileyo apho unokuthatha inxaxheba. singakuboleka iibhayisekile zethu ukuba ufuna ukuhlola indawo. Abafana bethu aba-3 bonke baphakathi kwe-11-15 yeminyaka ubudala ngoko ukuba unabantwana ngoko banokuthi bazane ngokunjalo. Sonke sithetha isiNgesi, isiPolish nesiTurkey kodwa unxibelelwano ngesiJamani nesiRashiya lunokwenzeka
silusapho sinabafana aba3 so almost every day sisekhaya. Ukufikelela kwindawo yakho kuhlala ngesalon yethu ehlala ingenanto kuba umfazi wam ubambe iiseshini zeyoga eziqhelekileyo a…
Iilwimi: English, Polski, Русский, Türkçe
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Michałowice-Osiedle